Nharembozha Email Chinyorwa Mutsetse Unoratidza | Martech Zone
ne nhare ichipfuura desktop yeemail yakavhurika mitengo, ndanga ndichiita imwe tsvakurudzo masikati ano pane iyo runoonekwa urefu hwemitsara yenyaya pane mbozhanhare. Misoro yenyaya inowanzo kuve yakakosha pane iyo email zvirimo pachayo kana zvasvika kune hunhu hwemuverengi uye kuti kana vachizovhura email.
Iye zvino iyo email zhinji yakavhurika pane mbozhanhare, iyo nhamba yemavara une pane iPhone, Android, Windows kana Blackberry chishandiso ipfupi nenzira inotyisa… iri pakati pevanhu makumi matatu nematatu chete uye makumi mana nematanhatu. Nyaya yedu pano… Nharembozha Email Chinyorwa Mutsetse Unoratidza inouya mune chete mavara makumi matatu nemana. Haisi iyo yakawanda nzvimbo yekusimudza kuda kuziva kwedu muverengi uye kuvaita kuti vavhure - kwakanyanya kunetsa kune vatengesi veemail.
Ichi infographic kubva kuMass Transmit inotsanangudza kutsvagiswa kuri paemail chidzidzo chemutsara kuratidza pane nhare mbozha
Tags: Android musoro wenyaya kurebaBlackberry nyaya yemutsara kurebadroid chidzidzo chemutsara kurebaiphone 4 musoro wenyayaiphone 4 musoro wenyaya kurebaiphone 5 musoro wenyayaiphone 5 musoro wenyaya kurebamutsara wenyaya wephoneiphone musoro wenyaya kurebanharembozha emailmusoro wenyaya kurebawindows nharembozha yenyaya mutsarawindows nhare yemusoro wenyaya kureba